फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - लोप्पा
लोप्पा देवी चापागाईं
आफैँले वा अरुले नाकै भाँचिने सोचले निधारबाट सुरू गरी च्यापुमा अडेस लाग्ने शर्तमा दिने दनकलाई लोप्पा भन्लान् । बलले, छलले, मानले, शानले मात्तिदै निमुखा निफरमाथि चल्ने भुसतिघ्रे अस्त्रलाई लोप्पाभन्दा अन्यथा नपर्ला । चोक्टा नान गएकी बूढी, लुठो तह लगाउन गएकी..., घिरौँला जिप्ट्याउने लुते, सिल्टिमूर खुत्याउने खुतेसम्मले पनि ऐन मौकामा पराधिनलाई सोझ्याउने भीषण अस्त्र हो, लोप्पा । तपाईँ ठान्नुहोला । लोप्पा दुब्लाले खाने पुष्टकारी हो तर अनेक रङ्गढङ्गका हुनेखाने, हुँदा खाने र नहुदाँ पनि खानुपर्नेहरूले कहिले तातो, कहिले अर्ध तातो र कहिले मनतातो पानीमा आयुर्वेदिक गोली खाएझैँ यसलाई हजम गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ ।
खानीखेलाको व्याजे र मस्याङ्दीको प्याजे गोदाम चौरको साली, लाटीक्वैलीको फुस्रे, पाटीचौरको नेप्टे, सबैले केही न केही, कुनै न कुनै बेला लोप्पारुपी गोलीको झोलीमा मुकुरिनु र भकुरिनु नपरेको कहाँ छ र ? कहिले दृश्यमा कहिले अदृश्यमा र कहिले अल्पदृश्यमा यसको स्वाद नभेट्टाइ कहाँ उम्किन्छन् र । दृश्यमा बाहेक अन्य अवस्थामा कुम्ल्याएको लोप्पा स्वयं व्यक्तिलाई पिरे पनि नातागोतालाई हम्मेसी चिल्न सक्दैन । त्यसबेला इज्जतको नाक ननेप्टिएको छनक मिल्छ । ऊ अरुका अगाडि निर्धक्क कुर्लन्छ लोप्पा पनि देख्ने गरी घिच्ने चीज हो ? आजकाल हरेक क्षेत्रमा लोप्पा खाने खुवाउनेहरूको चौपट्टटकै जमघट छ । शुभ मूहुर्तमा ‘ॐ नम शिवायः’ भन्ने पञ्चाक्षरी मन्त्र नभन्दा पनि केही फरक पर्दैन । फेरि यसो नभने वापत गुमाइहाल्नु पर्ने पनि केही छैन । फेरि लोप्पा बिर्सिए अघि लाग्न नहुने अघि कुदिसक्छ । भेट्टाउन नसक्ने गरी दौँतरीहरू उछिटिन्छन् । ऊ प्रगतिको थुम्काथुम्की निर्माण गरी अक्षतापाती हजम आफैँ गर्न तयार हुन्छ । चिन्ता आफ्नो भन्दा पनि अरुको पो छ । आफ्नो टोपीमा जुम्रो निर्धक्क हिडे हिँडोस् अरुको लंगौटीमा लिखाले सुघ्न नपाओस । आफू नाम कमाउन असमर्थ रहे पनि अरुले जीवनबाट पुल्टुञवाजी खाएको देख्दा पनि बेग्लै स्वाद हुन्छ ।
तपाईँ जुनजुन क्षेत्रमा नजर दौडाउनुहुन्छ, तीती क्ष्त्रमा लोप्पाका दर्जनौँ प्रतिबिम्व भेट्टाउनु हुन्छ । उछिट्टिएका खेलाडी, भकुण्डिएका राजनेता यसको महारोगबाट टाढिन सक्दैनन् । बिहेको बेहुलो, ब्रतवन्धको वटुक, घेवाको तामाङ, बिहेको सुचिकार, यी सबै लोप्पाकै उछिनपाछिनबाठ पग्लिन पुगेका छन् । तपाईँलाई लाग्ला यसले लोप्पाको कुरो गरेर एक झोक्का तीतो ओकल्यो । मैले फिटिक्क त्यसबारेमा गुनासो गरेको होइन । तपाईँ गम्भीर हुँदै जानुहोस् । समाजमा लोप्पाका अनेकौँ अवशेषहरू पूर्णशेषभन्दा पनि वलिष्ट छन् । पृथ्वी लोकको जुनसुकै कुनाकाप्चामा कोल्टिनुस् जहाँ पनि स्वरुप फरक भए पनि प्रारुप उस्तैउस्तै छन् । मानिस अचेल धेरै अरुको बारेमा जान्ने पल्टिएको छ । आफ्नो बारेमा आत्मालोचना पस्कन त भन्दा उसलाई आधा घण्टा धैर्यरुपी चौतारीमा विराजमान् हुन गाह्रो छ । अरुका बारेमा उसले पूरै महाभारत लेखिदिन सक्दछ न कि आफ्नो बारेमा एउटा स्यानो लेख । स्वआर्जनमा लम्किएका आशाका पाखुरेहरूलाई टुसुक्क पीरामा बसी शब्दको गुलेली हान्न पाउँदा ऊ साउनको लिडझैँ फुल्दछ । आदिदेखि आनादिकालसम्म, वरिष्ठदेखि कनिष्टसम्म मैहोस्देखि तैँहोस्सम्म, शिक्षकदेखि दीक्षकसम्म, ओठेभक्तिदेखि कोठेभक्तिसम्म, भूगोलको भीरदेखि नदीको तीरसम्म बेग्लावेग्लै आवरण र बोक्रामा पनि यसको साइनोले नछोएको कुनै संसार छैन ।
महाभारतकाललाई नियाल्नुहोस् । कुन्तीले आफू भुन्टी हुँदै आमा बन्ने सौभाग्य पाइन् । नावालक कर्णलाई आफ्नो कन्या पदवी खोसिदिन आँटेकोमा गुन्टाभित्र कुर्मु¥याइ लोप्पा चखाइदिएकी थिइन् । फेरि कर्णले नूनको सोझो गरेर दुर्योधनको पक्षमा लाग्ने फलामे तर्क राखेर माता कुन्तीलाई लोप्पा खुवाइदिएका थिए । उता किसानको झाँको झार्न पानी नपार्ने किरिया खाएका महादेवले किसानको सत्यताको लबटो खाई मरिचझैँ चाउटिएका थिए । ठूलो र सानोको विवाद टुञ्ग्याउन नसकी बिवादी भेलमा हामफालेका विष्णु र ब्रह्मालाई शिवलिङ्गरुपी पीपलमेट खुवाई महादेव देवादिदेवको सर्टिफिकेट किर्न सफल भएथे ।
पौराणिक प्रसङ्गको उदाहरण दिएर हामीलाई कन्भिन्स गर्न खोज्यो भनेर तपाई जञ्गिनु होला । तपाई अझै सक्नुहुन्छ भने केही क्षण घोत्लिने जमर्को गर्नुहोस् । घोत्लिनै पर्दछ भनी बाध्य पार्ने मसँग कुनै त्यस्तो अस्त्र छैन । आजका ताकतरामहरू गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको हुति र ह्याउ ममा छैन । केवल मैले त यहाँहरूको अगाडि अनुरोध गर्ने मात्र हो । कलमजीवी र सत्ताको स्वाद नपाएका हामीजस्ता सुधाहरूको अस्त्रशस्त्र भनेको अनुरोध नै त हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका, जापान, चीन, रसिया, फ्रान्स, जर्मनी र वेलायत अरुलाई पछि लगाउने अभ्यासमा व्यस्त छन् । विश्व विजेता बनेको अमेरिकालाई आर्थिक उन्नतिको झटारो हान्दै चिन सर्वशक्तिमान बन्यो । मानवतावादको दुहाइ दिँदै अटेरी सद्दामलाई लोप्लो घिचाउँदै अमेरिका स्वघोषित बहादुर बन्यो । तपाईँ अझै धैर्य गर्नुहुन्छ ? राजा महेन्द्रले ऋषिकेश शाहलाई राष्ट्रसंघीय महासचिवको सम्मानबाट घोक्रेठ्याक लगाएका थिए ।
गिरिजाप्रसादले महाराजका सामू प्रधानमुन्तरीको पदवी भिर्न दौरा सुरूवाल सिएका माधव नेपाललाई लोप्पाले स्वागत गरेका थिए । ...महाराजले प्रजातन्त्रलाई लोप्पा खुवाउँदै बाबुको सक्कली सन्तान बनेथे । लोप्पाले कसैलाई क्षणभरमै लाहुरे र निमेषभरमै माउरे बनाउने तागत राख्दो रहेछ । उँधोउँभो जता लम्किए पनि यसको झटनीको परिणाम हात लाग्दो रहेछ । प्रत्येक मानवको अगति र प्रगतिमा पनि लोप्पाको स्वादिलो चटनी लुकेकै हुँदो रहेछ । सफल असफल मार्गको दुनियाँ यसैको सेरोफेरोमा जम्दो रहेछ ।
लोप्पा इतिहासभन्दा थोत्रो दमाहाको धुनभन्दा धोत्रो छ । यो अन्जान र जानाजान दुवैबाट झुल्कन्छ । अपमान र सम्मान दुवै वाटिकामा मौलाउँछ । कहिलेकाहिँ सभ्य र असभ्यको खेलबाट भौतारिन्छ । उपल्लो र न्युनपल्लोको सङ्घर्षबाट फस्टाउँछ पनि ।